जनक्रान्ति सफल हुन अब धेरै समय लाग्दैन : प्रकाण्ड, प्रबक्ता , नेकपा – JanaSanchar.com
जनक्रान्ति सफल हुन अब धेरै समय लाग्दैन : प्रकाण्ड, प्रबक्ता , नेकपा
संबाददाता : मोनिका गुरुङ	प्रकाशित मिति: (२०७५ मंसिर १७, सोमबार) १६:२३
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्त खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले केही समय अघि चर्चामा रहे । चन्दा आतंक मच्चाएको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अभियोग दर्ता गर्यो । अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि फेरि अर्को मुद्दा थपेर हिरासत लम्ब्याउँदै गयो । अहिले उनी खुला रुपमा हिँडडुल गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवहार भने भूमिगत शैलीको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
एकीकृत जनक्रान्ति थाल्नुभएको हो ?
हो, हामि त्यसको तयारीमा छौं । पार्टीले गर्ने आह्वानमा फेरि पनि युवाहरु आउँछन् र एक पटक क्रान्ति हुन्छ । क्रान्तिमा थकान भन्ने हुँदैन । संघर्ष चर्किदै जाँदा जनसेना, जनअदालत र जनसरकार पनि गठन हुन्छ । एकीकृत जनक्रान्ति एक दुई वाक्य वा एकछिनको बसाईमा बुझिने कुरा होइन । यसलाई व्याख्या गर्न समय लाग्छ । सुन्ने धैर्यता पनि चाहिन्छ ।
संसदवादी दलहरुले विभिन्न नाराहरु दिएर चुनाव जिते । त्यो बेलाको नेकपा एमालेलाई जनताले जनादेश दियो । वा माओवादीसहितको मोर्चालाई जनादेश आयो । दुई तिहाई नजिकको सरकार बनेको छ ।
यो सरकार बनेको नौ महिना भयो । यति बेलासम्म जनताको पक्षमा जनताले देख्ने गरीकन एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । हामीले संसदवाद भनेकै राष्ट्र र जनताविरोधी व्यवस्था हो है भनेका थियौं ।
देशका मुख्य भ्रष्ट व्यक्तिहरु सरकारमा रहेकाहरु नै हुन् भन्ने उनको ठहर छ । तर, नेकपाले कालोमोसो चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरुलाई किन दल्छ ?
कारबाहीमा कुनै पनि भ्रष्टहरु छुट्ने छैनन् । कोही पनि छुट्ने छैनन् भनेपछि सबै पर्छन भनेको हो । बुझ्नु भो त ? नेपालको वर्तमान राज्य सत्ता नै विदेशीको दलाली गर्ने मतियारको रुपमा छ ।
राष्ट्रघात पनि डरलाग्दो छ होइन ?
देश र जनताको विरुद्धमा क्रियाकलाप गर्ने भनेका थियौं । त्यो पुष्टि भएको छ । राष्ट्रघात पनि डरलाग्दो भएको छ । विगतको आन्दोलन र जनयुद्धबाट संघर्षबाट प्राप्त अधिकार पनि खोसिने क्रममा छ ।
१९५० देखि यता राष्ट्रियतामा दखल गरेका छन् विस्तारवादीहरुले । नेपाली जनताको आफ्नै सत्ता स्थापनाका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा हामीले गरेका हौं । हामी राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका छौं । जनतामा जान्छौं । आवश्यकता पर्दा संघर्षको जुनसुकै रुप पनि अवलम्वन गर्छौं । यो दिशातिर पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । यो क्रान्तिमा समाहित गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हामी संघर्ष गरिरहेका छौं । यी आधारभूत आवश्यकता राज्यले जिम्मा लिने काम गर्नु पर्छ ।
राज्यले जनतालाई रोजगारी पनि दिनु पर्छ । यो दायित्व राज्यको हो ।
प्रचण्ड जीले धोका दिएकै हो ?
हो, उहाँले जनयुद्वको मर्म बुझ्नुभएन । प्रचण्डजीले शुरुमा जो भन्नु भएको थियो, जे गर्नुभयो त्यो मूलभूत रुपमा सहि थियो । जसका कारण जनयुद्ध शक्तिशाली भयो । पछिल्लो दिनमा उहाँ त बदलिनु भयो । गन्तव्य छाडेर अन्यत्र गएपछि नेपाली क्रान्तिलाई धोका भयो । अहिले देश अप्ठ्यारो ठाउँमा छ ।
अब यता हाम्रो कुरा हेर्दा खेरी के छ भन्नु हुन्छ भने विगतमा राष्ट्र र जनतालाई भएको धोकाको पूर्ति गर्न नयाँ पार्टी गठन भएको हो । अबको वैज्ञानिक क्रान्तिका लागि भएको आन्दोलन हो । राष्ट्रिय आत्ममर्पणवादको अन्त्य गर्ने हो । जनताको राजनीतिक अधिकार र सत्ता स्थापना र धोकाको अन्त्य गर्ने दायित्व हो ।
जनक्रान्ति सफल होला त ?
जनक्रान्ति सफल हुन अब धेरै समय लाग्दैन । जनताले दशकौं पर्खिन पर्दैन । किनभने देशको संकटको अन्त्य नगर्ने हो भने यसले त देश र जनताले थ्रेट गरिरहेका छ ।
जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरुको अनिवार्य दायित्व देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने पनि हो । तर खै त ? वस्तुस्थिति यस्तो बनेको छ संघीय लोकतन्त्र नामको दलाल संसदीय व्यवस्था एक वर्ष नपुग्दै जनताका अगाडि सर्वांग भएको छ ।
जनताको घृणाको वस्तु भएकोछ । यसकारण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले ठीक तरिकाले हल गर्न आवश्यक छ । जबसम्म जनता र राष्ट्रको समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म क्रान्तिबाट हार खान हुन्न । धोकाबाट निराशा त हुन्छ । समस्याले चेप्दै चेप्दै आएपछि त्यो धोका विद्रोहमा बदलिन्छ ।
यो एक वा दुई पटक भन्दैमा हुँदैन । मैले पूर्वजनमुक्ति सेनाका युवाहरुको पनि मैले कुरा सुनेको छु । पुरानो तरिकाले राजनीति असम्भव पनि छ । हामीले हाम्रा विचार अगाडि सारेपछि जनता आशावादी भएका छन् । हामीले जनताको मुद्दा उठाएपछि आशावाद पैदा भएको छ । जनताका लागि हामीले काम गरेपछि युवाहरु प्रभावित हुनेछन् । परिवर्तनको विधिगत तरिकालाई समर्थन प्राप्त हुनेछ ।
सरकारको मुल्याङकन कसरी गर्नुभएको छ ?
सरकारले त माखो पनि मारेन । जनता निराश छन् । पछिल्लो समय सामाजिक अपराध पनि बढेको छ । सरकारले यसैलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्छ्, यसैलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भन्छ । कम्युनिष्टहरुले पार्टी, आन्दोलन, सिद्धान्तको बदनामी गर्ने तरिकाले खेल भइरहेको छ । देशको मुख्य सत्रु भनेको आत्मसमर्पणवादी तत्व हो ।
जनताको राजनीतिक अधिकारलगायतको सन्दर्भमा दलाल पूँजीपति वर्गको भ्रष्ट गिरोह अर्को सत्रु हो । त्यसकारणले यसैकाविरुद्धको संघर्ष नै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यक्रम हो । जनसंघर्ष र जनकारबाहीबाट हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं ।
विखण्नकारी तत्वहरुलाई कारवाही गर्नुभएन त जस्तै सिके राउत ?
सिके राउत देशलाई विखण्डन गर्न चाहने विदेशीबाट सञ्चालित व्यक्ति हो । त्यो पनि गम्भीर कुरा छ । त्यो भन्दा गम्भीर कुरा अर्को पनि छ । त्यत्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार नै राष्ट्रघाती भयो । योसंँगको मुद्दा पनि कमजोर बनाउन सकिदैन । सरकार नै राष्ट्रघात भएको छ । त्यसपछि त्योसँग जोडिएर आएको अरु तत्वहरुलाई पनि ठीक गर्नु पर्छ ।
तपाईहरुले गर्ने क्रान्ति भनेको कस्तो खालको हो ?
कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने क्रान्ति भनेकै पुराना परम्परावादी, राष्ट्रलाई अहित हुने प्रकृतिका विषयहरु हटाउनका लागि हुने गर्छ । पुरानो राज्यसत्ता, शासनहरुको अन्त्यका लागि क्रान्ति हुन्छ । जनताको शासन ल्याउनका लागि क्रान्ति हुन्छ । यसबाट जनसेना, जनअदालत त अनिवार्य कुरा हो । त्यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । जनसरकार नै गठन भइहाल्छ नी ।
निर्मलाका हत्यारालाई कारबाही गर्छौ भन्नुभयो, खोई कारबाही गरेको ?
पहिलो कुरा त हत्या हिंसा बलात्कार रोक्नेसरकारकै दायित्व हो । यसले नगरेपछि हामीले गर्ने कुरा आउछ । साउनमा निर्मलाको बलात्कार र हत्या भयो । म असोजमा हिरासतबाट मुक्त भएँ । बाहिर र भित्रबाट म यो विषय नियालिरहेको छु । निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा सरकार निकम्मा भएको, लापरबाह भएको देखेपछि मैले हिरासतमुक्त हुनेसाथ अब निर्मलालाई जनताले न्याय दिनु पर्छ भनेर बोलेको थिएँ ।
निर्मलाको केसलाई राष्ट्रिय प्रदर्शन गर्ने छौं । अर्को कुरा हत्यारा नै संरक्षण सरकारले गरिरहेको छ । सरकार नै बलात्कारी र हत्यारा बनिरहेको छ । राज्यले नै गरिरहेको छ यो सबै अपराधहरु ।
निर्मलाको हत्यारा र बलात्कारीलाई कारबाही गर्न हामी निरन्तर संघर्ष गर्छौ। पहिलो दायित्व त फेरि यहि राज्यसत्ताको काम हो नी । भएन भने त हामी गर्छौं गर्छौं । जनताको बीचमा अनि सार्वजनिक गर्छौं ।
साभार लाल्टिन खवर
(२०७५ मंसिर १७, सोमबार) १६:२३ मा प्रकाशित